छिटो खबर २०७८ श्रावण ४ गते सोमबार ०९:४५:५१ मा प्रकाशित
४ साउन, काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एकजना डिनले अध्ययन विदा लिएर राजनीतिक नियुक्ती लिएको खुलासा भएको छ ।
इन्जिनियरिङ संकायका डिन अनन्तराज घिमिरेले अध्ययन विदा लिएर ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको म्यानेजिङ डाइरेक्टर (प्रवन्ध निर्देशक) पदमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका हुन् । सो कम्पनीको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ ।
सहप्राध्यापक घिमिरेले एक वर्षे अध्ययन विदा लिएर चार वर्षे अवधि रहने (प्रवन्ध निर्देशक) पदमा नियुक्ति लिएका हुन् । ई. घिमिरे तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पालामा नियुक्त भएका हुन् । घिमिरे स्वयंले अध्ययन विदा स्वीकृत गराएर राजनीतिक नियुक्ति लिएको अनलाइनखबरसँग स्वीकार गरेका छन् ।
‘कार्यकारी परिषदको निर्णय नं. ३१० अनुसार सम्बन्धित निकायसँग प्रष्ट जानकारी माग गर्ने निर्णय भएबमोजिम तहाँ कार्यालयबाट निजको नियुक्तिका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट खुल्ने गरी आधिकारिक जानकारी गराइदिनुहुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ,’ प्रशासन अधिकृत दिनेश गौतमको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा लेखिएको छ । यद्यपि त्यसको जानकारी मन्त्रालयबाट अझै नपाएको विश्वविद्यालय स्रोतले बतायो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव एवम् विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष देवेन्द्र कार्कीले भने अध्ययन विदामा रहेको व्यक्ति नियुक्त भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
घिमिरे सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ केन्द्रीय क्याम्पसको सहप्राध्यापक हुन् । उनले मलेशियाको लिंकन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी (विद्यावारिधि) गर्ने भनेर विश्वविद्यालयबाट विदा लिएका थिए ।
उनलाई २०७७ मंसिर २५ गतेदेखि लागू हुने गरी विश्वविद्यालयले एक वर्षका लागि अध्ययन विदा स्वीकृत गरिदिएको थियो । घिमिरेको अनुपस्थितिमा विज्ञान संकायका डिन सुदीप ठाकुरीलाई इन्जिनियरिङ संकाय हेर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
घिमिरेले ६-६ महिनामा अध्ययनको कार्यप्रगति विवरण विश्वविद्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने र पेश नगरेमा उनको विद्यावारिधि अध्ययन विदा खारेज हुने निर्णय कार्यकारी समितिले गरेको छ । घिमिरेले ६ महिना गुजारिसकेकाले अब उनको विदा खारेज हुने प्रक्रियामा गएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह बताउँछन् ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिंहका अनुसार घिमिरेले सुरुमा तलब पाउने गरी अध्ययन विदा लिएका थिए । तर, उनले जब राजनीतिक नियुक्ति लिए, त्यसपछि तलब रोक्का गरिएको उपकुलपति सिंह बताउँछन् ।